Blocking Abc.xyz Referral Spam - Torohevitra mahasoa avy amin'ny Semalt
Abc.xyz dia anarana nomena malaza, izay fananan'i Alfabet Inc. Noho ny antony tsy fantatra dia nomena anarana hoe spam avy amin'ny Google Analytics io anarana nomena io. Noho izany, maro ireo webmasters no nanakana azy io ho fototra maharitra, ary tokony hanao toy izany koa ianao. Notaterina fa ny abc.xyz dia nakaton'ny maro an'isa webmasters manerana izao tontolo izao. Izany dia nahitana tahirin-tsarin'i Google Analytics tamin'ny fandaharam-pizaran-kevitry ny sehatra tsy ara-dalàna sy ny fifamoivoizana tsy ara-dalàna. Tsy mety ny milaza fa io dia iray amin'ireo tranonkala spamming mampidi-doza indrindra ary tsy tokony havotsotra amin'ny laoniny.
Milaza i Jack Miller, mpitantana ny fahombiazan'ny Customer Success of Semalt fa raha efa nitsidika ity URL ity ianao, dia ho voavonjy ao anaty navigateur ny rohy. Ankoatra izany, mitarika ny mpiserasera amin'ny pejy web misy hafatra hafahafa. Ny iray amin'ireo hafatra ireo dia vakiana satria avy amin'ny mpamorona sy ny tale jeneralin'ny Google, Larry Page, saingy ny zava-misy dia tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy ary tokony hikatona haingana araka izay azo atao.
Mibahana ny URL ao amin'ny Google Analytics
Ity URL manokana ity dia mampiasa tetikady marobe mba hampisehoany tena azo itokisana sy ara-dalàna. Maro ny olona no mametraka azy ao amin'ny tranokalany ary mihevitra azy io ho fandaharam-pianarana tsara, saingy tsy marina izany. Izany dia miteraka fifamoivoizana maimaim-poana amin'ny tranokalanao, manimba ny angoninao isan'andro. Ny fametrahana ity URL ity amin'ny Google Analytics amin'ny voalohany dia zava-dehibe. Ity URL ity dia tsy atolotro amin'ny tranokala lehibe sy ireo mpanome tolotra serivisy satria nifandray tamin'ny fanafihana phishing maro. Ny hackers sy spammers dia mandray ny olona amin'ny spam referre ary mangalatra ny mombamomba azy manokana. Abc.xyz dia tranonkala ara-dalàna, kanefa rehefa mifandray na mifandray amin'ny vohikala hafa, dia tsy afaka mahazo valiny tsara izy ireo.
Ny tanjona sy ny tanjon'ireo mpitsoa-ponenana dia ny mifantoka amin'ny angona sy rakitra ao amin'ny tranonkalanao. Miezaka manintona ny olona amin'ny alalan'ny fampielezan-kevitra maromaro izy ireo. Milaza izy ireo fa hampiroborobo ny tranokalanao izy ireo ary hahatonga anao hitsidika kalitao, saingy tsy marina izany. Saika ny mpitsikera rehetra no manatsara ny soso-kevitry ny fikarohana Google ka mamorona rindranasa, mampiasa ny tranokalanao izy ireo mba hamoronana rakitra toy izany ary afaka mamorona olana ho anao. Niparitaka tamin'ny botsikin'ny Google izy ireo ary miangavy ny hanao asa ho anao.
Ny loza ateraky ny toerana misy anao
Ny abc.xyz google Analytics referrer spam dia mikasa ny hanimba ny tranokalanao ary hanimba ny fandrefesana azy amin'ny aterineto. Manimba ny tahirin-kevitrao izany ary mamorona tatitra sandoka. Ny dingana manaraka dia ny mandefa anao hitsidika sy hitsikera hosoka, ka ny fisalasalan'ny Google Analytics anao. Manimba ny ankamaroan'ny tatitra ataonao izany ary mampihena ny kalitaon'ny fifamoivoizanao. Noho izany dia tena zava-dehibe ny manakana ity tranonkala ity ary aza manoratra momba ny fifanarahana sy ny tolotra, na dia manintona sy mahafinaritra aza izy ireo. Hahazo taham-pihambahambana avo be ianao ary hifantoka amin'ny teny filamatrao mba hametrahana ny tranonkalany manokana. Mba hialana amin'izany dia tokony hamorona filters ianao ary hanakana azy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny safidinao. Azonao atao ihany koa ny manangana filirara hanafoanana ny fiarovanao an-tserasera Source .